America neChina Vanovharirana Imwe Mizinda Yavo
Mushure mekunge America yaudza China kuti ivhare muzinda wayo muguta reHouston, mudunhu reTexas, hukama nekudyidzana pakati penyika mbiri idzi hwakadzikira zveikuru. America iri kupomera China mhosva yekuti nhumwa dzayo dziri kuita zvehusori, dzichiba ruzivo rwezvenyaya dzezvehupfumi nekugadzirwa kwezvinhu.
China yakapinduravo nekuudza America kuti ivhare muzinda wayo muguta reChengdo, izvo zvakawedzera kusawirirana pakati penyika mbiri idzi.
Nemusi weSvondo, America yakasunga umwe mukadzi weku China akange akapotera mumuzinda weChina muguta reSan Francisco, achipomerwa mhosva yekuvanza kuti aimbove mumauto eChina.
Izvi zvese zviri kuwedzera kusawirirana pakati penyika idzi, idzo dzagara dzichinetsana pamusoro penyaya dzekutengeserana uye pamusoro pemutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, avo vanogara vachishora China vachiti yakatadza kumisa coronavirus munyika mayo izvo zvakaunza chirwere ichi kunyika zhinji pasi pose.
Vanodzidzisa zvekudyidzana kwenyika paCalifornia State University, kuChico, mudunhu reCalifornia, Doctor Angela Gapa, vanoti kusawirirana kwenyika mbiri idzi kwakagara kuripo kwenguva refu zvekuti hazvisi nyore kuti vaonerana nenzira imwe chete.
Doctor Gapa vanoti kuvimbana pakati penyika mbiri idzi kushoma asi sezvo dziri nyika dzino tengeserana zvinhu zvakawanda pahuviri hwadzo, dzichawana nzira yekushanda dzese kunyange paine kufungirana pakati padzo.
Hurukuro naDoctor Angela Gapa